July 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
aung koe at 6:13:00 PM 0
Maung Pauk at 6:11:00 PM 5
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ. ခုတလော Internet Connection လိုင်းက လုံးဝ ကျနေတဲ့အတွက် Email တောင်မှ ဖွင့်ဖတ်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်.. ပို့စ်တွေ တင်ဖို့အတွက် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားပေမယ့် စာသားချည်းပဲ တင်ဖို့တောင် အဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်.. ဒါကြောင့် မေးထားတာတွေ၊ တောင်းထားတာတွေမဖြေနိုင်၊ တင်မပေးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်.. ဒါကြောင့် အီးမေးကို မေးထားတဲ့သူတွေရော၊ Comment မှာ ရေးထားတာတွေကိုရော ကျွန်တော် ပြန်လည် တုန့်ပြန်မှုမပေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့ လေးစားစွာ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. Connection အဆင်ပြေတဲ့အခါ ဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ တင်ပေးနိုင်တာတွေကို ဖြေကြား တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
Firmware Huawei Phone Application SONY
Maung Pauk at 5:02:00 PM 2
C8813D （C8813D,Android 4.1,Emotion UI,V100R001C92B168) Official Firmware
Maung Pauk at 3:13:00 PM 6
1500 တန် CDMA 800 MHz တွေ ပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် Huawei C8813D ဟာ လူသုံးအများဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.. မြန်မာစာသုံးဖို့အတွက်တော့ Root ဖောက်စရာမလိုဘဲ မြန်မာစာပါတဲ့ Themes ထည့်ရုံနဲ့ မြန်မာစာကို ဖတ်နိုင်တဲ့အတွက် ပိုအဆင်ပြေတာကို တွေ့ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် Root မှ Root ဆိုသူတွေ Root ကြရင်း အခန့်မသင့်လို့ Firmware ပျက်စီးသွားခဲ့ရင် Official ပြန်တင်လို့ရနိုင်အောင် C8813D （C8813D,Android 4.1,Emotion UI,V100R001C92B168) Official Firmware လေးကို ဒေါင်းပြီး ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်.. တကယ်တော့ VRoot နဲ့ Root လိုက်ရင် ဒီကောင်က ပေါက်ပါတယ်.. Firmware ရဲ့ Feature အပြည့်အစုံကတော့ Huawei C8813D firmware (C8813D, Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B168, China Telecom) ဖြစ်ပါတယ်..
Antivirus USB ဆော့ဖ်ဝဲများ
Maung Pauk at 2:46:00 PM 1
USB ကတစ်ဆင့် Virus ကူးစက်မှုပြဿနာကို 100% ထိ ကာကွယ်ပေးတဲ့ USB DISK SECURITY 6.4.0.1 ထွက်လာလို့ မိတ်ဆွေများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ.. အထွေအထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါ.. Antivirus အုပ်စုဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မြန်ဒေါင်းပြီး Install လုပ်ထားရင် နောက်ဆုံးထွက် Virus တွေကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. အထဲမှာ ကီးတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်.. ကီးမဖြည့်ခင် Internet ကို ခဏ ပိတ်ထားဖို့ သတိပေးပါရစေ.. Internet ကို မပိတ်မိရင်တော့ full version ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ..
Huawei G510-0010 (U8951D) Build Number B179 နဲ့ဆုံးတဲ့ Firmware
Maung Pauk at 2:18:00 PM 0
Huawei G510-0010 (U8951D) Build Number B179 နဲ့ဆုံးတဲ့ Firmware ကိုလိုချင်နေသူမိတ်ဆွေများ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ.. ဖိုင်ဆိုဒ်က 550.99 MB ရှိပါတယ်.. Android Version က 4.1 ဖြစ်ပြီး MD5 ကတော့ 8AB08063EA8AEEC3AD640D983D5C45CE ဖြစ်ပါတယ်.. Emotion UI ပါရှိတဲ့အတွက် မြန်မာစာကို Root ဖောက်စရာမလိုဘဲ သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. Emotion UI Themes with font ကိုသုံးလိုက်ရုံပါပဲ.. ကဲ. Firmware ကို ဒေါင်းနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ.. ဘာ adf မှ တစ်ဆင့်ခံမထားပါဘူး... မိတ်ဆွေများ ဒေါင်းရလွယ်အောင်လို့ပါ..
Internet and Email Knowledge Website အညွှန်း
Onlone မှာ 1000 GB Storage ရနိုင်တဲ့ Davvas.com
Maung Pauk at 12:45:00 PM 8
ကျွန်တော်နဲ့ ဘဝတူ ညီအစ်ကို Blogger များခင်ဗျာ..။
ကျွန်တော် အခု Upload ဆိုဒ်လေးတခုကြေညာပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုဒ်ကတော့ Davvas ပါပဲ။
သူက Free User တွေအတွက် အတော်ကိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်။
သူကို Register လုပ်လိုက်ရင် အောက်ပါခံစားခွင့်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ 100 GB free space ရမယ်ဗျာ။
၂။ ဖိုင်တခုချင်း5GB အထိ တင်နိုင် ဒေါင်းနိုင်မယ်ဗျာ။
၃။ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တခုကို နောက်ဆုံးဒေါင်းချိန်မှ နောက်ရက်ပေါင်း 2000 အထိ ထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ်။
၄။ Internet download manager ကို Support လုပ်တဲ့အပြင် နာရီ 500 အထိ Resume လုပ်ခွင့်ပေးပါသေးတယ်။
ကဲ အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့တင် ကျွန်တော်တို့ ဒီဆိုဒ်ကို အသုံးပြုသင့်ပြီဆိုတာကို အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။
အဲ Register လုပ်မယ်ဆိုရင် Payment info, Coupon code တွေမှာတော့ ဘာဖြည့်စရာမလိုပါဘူး။ အဲဒါက Premium User တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တချက်က ကိုယ်က 1 GB အထက်ဖိုင်တွေကို ကိုယ်ဆီက လာလည်သူတွေဒေါင်းခိုင်းစေချင်ရင်တော့ သူတို့ကိုလည်း အဲလို Free Register လုပ်ဖို့တော့ သတိပေးရပါ့မယ်။
ဘာကြောင့်ဆို သူက Register မလုပ်သူတွေကိုဒေါင်းခွင့် က 1 GB သာပေးထားတာဖြစ်လို့ပါ။
ကျန်တဲ့အချက်တွေကို အောက်မှာ ကြည့်သွားကြပါဗျာ။
ဒီပို့ကို ဖတ်ပြီး Upload ဆိုဒ် ကောင်းကောင်း သိသူတွေကလည်း အောက်က ကွန်မန့်မှာ share ပေးသွားပါအုံးဗျာ..
Hay, all of my Friendly Bloggers and Guests, this is KoYan.
I want to recommendanew upload and sharing site.
That is Davvas (www.davvas.com).
I can say it is very nice and secure file hosting provider.
You can ask me, why???
If you register in this site, you can get many benefits and results. What they are??
100 GB free Upload Space.
5 GB Upload and download per file size.
Can Downloads resume and support Internet download manager (IDM).
Files will deleted at 2000 days after last download.
And many more... you can see what result of registe user chance in following pictures.
See here FAQ and TOS.
Don't worry about anythings, now you just go and register to Davvas .
If you want to share more than 1GB size uploaded file, you must say to do register for free to your Guests or friends. Bcoz davvas allowed to download more than 1 GB size files for only registered user.
If you have other good upload and sharing sites, Please let me know and share me. Thanks!!
Facebook Auto Like လုပ်ပေးသည့် Site Lists များ
Myanmar IT Helper at 9:59:00 PM 0
အခု Internet လိုင်းတွေက အရမ်းကိုနှေးနေပါတယ်...
File တွေ တင်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ Tutorial လေးတွေ ပြပေးချင်ပေမယ့်... လိုင်းက အရမ်းစုတ်နေတော့..
ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်လို့ပါ.... အခု ကျွန်တော့် ဆိုက်ထဲမှာ မှတ်စုအဖြစ်ရေးခဲ့ တဲ့ ပို့စ်လေးပြန်တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်... ဒါကတော့ Fake ပေါ့ဗျာ.. ဗဟုသုတ အနေနဲ့ပေါ့....
မိမိရဲ့ Facebook Page ကို Autolike လုပ်ပေးမယ့် Sites တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်
သူ့ဆိုက်မှာ Register or Sign up လုပ်ပေးရပါမယ် သူခိုင်းတာလေးတွေ အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးလိုက်ရင်
သူတို့ဆိုက်ကနေ ကိုယ့် Page ကို Auto Like လုပ်ပေးပါတယ်.....
သူငယ်ချင်းတွေ ကို "ငါ့ Page ကို ကြည့်စမ်း Like တွေအများကြီးပဲ" ဆိုပြီး ကြွားလို့ရတာပေါ့ဗျာ.....
ကျွန်တော် Text File တစ်ခုနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Download လုပ်လိုက်ပါ
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က Facebook နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ မှပဲ တင်တာ လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်..
နောက်ပိုင်း ပိုလန်းတဲ့ ပို့စ်လေးတွေ လာပါဦးမယ်.... အခုတော့ ဒီလိုင်းနဲ့ မို့ ဒီလောက်ပဲပေါ့ဗျာ...
Downloader Mobile Downloader Phone Application ဆော့ဖ်ဝဲများ
အခပေးဝယ်ရတဲ့ App တွေကို အလကားဒေါင်းလို့ရမယ့် Direct App Market apk 7.6
Maung Pauk at 7:16:00 PM 2
Direct App Market apk လေးကို Install လုပ်ထားပြီး Android Device ပေါ်ကနေ အခပေးဝယ်ရတဲ့ App တွေကို အလကားဒေါင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. Market တစ်ခုလိုတည်ဆောက်ထားပြီး 1 Click နဲ့ဒေါင်းလို့ရနိုင်တာကြောင့် ထည့်ထားသင့်တဲ့ app လည်းဖြစ်ပါတယ်.. Google Play ကိုဝင်မရဘူးဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် ပိုမိုသင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.. Google Play မှာတောင် App တွေကို ဒေါင်းခွင့်ပေးမထားဘဲ တိုက်ရိုက် Install လုပ်ခွင့်ပဲပေးထားတာပါ.. ဒီကောင်လေးကတော့ ဒေါင်းပြီးသိမ်းထားနိုင်ပါမယ်..
Blu-Ray Disc အကြောင်းသိကောင်းစရာ
အိုင်တီသားလေး at 6:31:00 PM 0
Blu-Ray Disc ကို အတိုကောက်အနေနဲ့ BD လို့ ခေါ်ပါတယ်။ High Definition Video နှင့် Data တွေ
သိုလှောင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Disc လေးပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ
တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေတဲ့ DVD တို့ CD တို့နဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူပါတယ်။ အပြာရောင် Laser
အလင်းတန်းကို အသုံးပြုပြီး ဖတ်ရ၊ ရေးရတဲ့အတွက် Blue Ray Disc လို့ ခေါ်တာပါ။ အနီရောင်
Laser အလင်းတန်းကို အသုံးပြုတဲ့ ရိုးရိုး DVD Format ထက်ကို Data ပမာဏများများ သိုလှောင်နိုင်
ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Two Layer DVD ထက်ကို (၆)ဆသာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
တဖက်တည်းသုံးလို့ရတဲ့ Single Layer DVD ထက်ကို ဆယ်ဆခွဲလောက် ပိုဆန့်ပါတယ်။
Blu-Ray ဟာ HD DVD နဲ့ အပြိုင် ထွက်ခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Blu-Ray က အနိုင်ရတယ်ပဲ ဆိုကြပါစို့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HD DVD ထုတ်တဲ့ Company တွေဟာ Blu-Ray ကို စိတ်ဝင်
စားလာကြလို့ပါပဲ။ Blu-Ray Disc ကို Blu-Ray Disc Association ကနေ ထုတ်လုပ်တာပါ။ Blu-Ray ရဲ့
CD/DVD တွေ အပေါ် အဓိက အားသာချက်ကတော့ Data တွေကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ များများ
ယနေ့ခေတ်မှာ Electronic ပစ္စည်းတွေ၊ Recording Media တွေ Video Game နဲ့ Music တွေထုတ်လုပ်
တဲ့ Company ပေါင်း ၁၀၀ လောက်က Blu-Ray Technology ကို အသုံးပြုလာကြပါပြီ။
Blu-Ray က Data တွေ ဘယ်လိုဖတ်မလဲ
Blu-Ray Disc က Data တွေကို 1.1 mm အထူရှိတဲ့ Poly Carbonate Layer ရဲ့ အပေါ်မှာ သိမ်းပါတယ်။
Data သိမ်းတဲ့ Layer က Data ဖတ်မယ့် မှန်ဘီလူးနဲ့ နီးကပ်နေတာကြောင့် အလင်းတန်းတွေဖြာထွက်
သွားတာမျိုးလို Data ဖတ်ရာမှာ ကြုံရမယ့် ပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Disc အနေအထား ပျက်သွားလို့ ဖတ်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ပြဿနာလည်း ရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Data
တွေ သိမ်းတဲ့နေရာဟာ Disc ရဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ပိုမို နီးကပ်လာတာကြောင့် ခြစ်ရာတွေနဲ့
လက်ဖွေရာတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် Disc ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ မာကျောတဲ့ အလွှာတစ်ခုနဲ့ Coated
လုပ်ထားပါတယ်။Blu-Ray Disc ရဲ့ Design ထုတ်ထားပုံကလည်း Disc ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကို လျော့ကျစေ
ပါသတဲ့။ ရိုးရိုး DVD တွေကတော့ Recording Layer ကို 0.6 mm စီထူတဲ့ Disc ပြား နှစ်ခုနဲ့ညှပ်ထားတာ
ပါ။ Discနှစ်ခု ပေါင်းထားတာရယ်၊ Recording Layer ဟာ Disc တခုခုမှာ အသေတပ်ထားရတာ
ရယ်တို့ကြောင့် အလင်းတန်းလာတဲ့အခါ ဖြာထွက်မသွားအောင် ဂရုတစိုက် ထုတ်လုပ်ထားရတာပါ။
Blu-Ray ကတော့ 1.1 mm အထူရှိတဲ့ Disc တစ်ခုတည်းမှာ Recording Layer ကိုမျက်နှာပြင် နားကပ်ပြီး
ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Disc တစ်ခုတည်း သုံးထားတဲ့အတွက် သူ့ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ စရိတ်လျော့ကျ
သွားတယ် ဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့အပေါ်ကနေ အလွှာတစ်လွှာ ထပ်အုပ်ပေးရတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ဆိုရင်တော့
သိပ်မထူးခြားပါဘူး။ Blu-Ray Disc တစ်ချပ်ကို ၀ယ်မယ်ဆိုလျင်တော့ ယနေ့ ဈေးကွက်မှာ ရှိတဲ့
Blu-Ray Disc တွေရဲ့ တန်ဖိုးက တစ်ချပ်ကို $20 ကနေ $50 ကျော်ထိ ရှိပါတယ်။
Blu-Ray ဘယ်လို Read/Write လုပ်သလဲဆိုတာ အထက်ပါ ပုံမှာ ပြထားပါတယ်။ ပုံမှာ 1.1 mm ထူတဲ့
Poly Carbonate Layer Disc တစ်ခုတည်းကို သုံးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ 405 nm Blue Laser ဆိုတာက လှိုင်းအလျား 405nm သာရှိတဲ့ အပြာရောင် Laser အလင်းတန်းကို ပြောတာပါ။ DVD မှာ သုံးတဲ့ အနီရောင် အလင်းတန်းက 650nm ရှိပါတယ်။ လှိုင်းအလျားပိုသေးငယ်ခြင်းက Disc ဖတ်ရာမှာ
Track Pitch တွေကို ပိုမိုပြီး သေးငယ်စေတယ်။ အဲဒီတော့ Data တွေ ပိုသန့်စေတာပေါ့။ Blu-Ray ကို အထင်ကရ ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေထဲမှာ Tack Pitch သေးငယ်ခြင်းက အဓိကပါ။ Track Pitch ဆိုတာက
Laser အလင်းတန်းက တစ်ခါဖတ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီအလင်းတန်းလေးက Disc ပြားပေါ်မှာယူတဲ့နေရာလေး
ပါ။ Blue-Ray Technology မှာ အဲဒီ Tack Pitch နေရာလေးက 0.3 micrometer ပဲ ရှိပါသတဲ့။
Blu-Ray Disc ကို သုံးမယ်ဆိုရင်
၁။ Blu Ray ဟာ Data တွေကို ပိုများများ သိမ်းနိုင်ရုံတင်မကဘဲ Interactive ဖြစ်ပါတယ်။ Interactive
ဖြစ်တယ်ဆိုတာက အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်လျင် အသက်ရှင် လှုပ်ရှားနိုင်တာကို ပြောတာပါ။
ဒီနေရာမှာတော့ အသက်ရှင်တယ်လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဒီ Blu-Ray ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Blu-Ray
Format နဲ့ Subtitle တွေ Movie တွေကို Internet ပေါ်ကနေ အလွယ်တကူ ယူလို့ရတာကို ပြောချင်
၂။ Blu-Ray က HDTV တွေကို အရည်အသွေး မကျစေဘဲ Record လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ Disc ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ခြစ်ရာတွေ၊ အစင်းရာတွေကိုလည်း အလွယ်တကူကျော်ပြီး ဖတ်နိုင်တယ်လို့
၄။ Disc ပေါ်က Program တစ်ခုကို ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ ၎င်း Disc ပေါ်မှာ အခြား Program တစ်ခုက Record လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ Playlists တွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
၆။ Disc ပေါ်မှာ Record လုပ်ပြီးတဲ့ Program တစ်ခုကို ပြန်ပြင်ချင်တယ်ပြန်ပြီးတည်းဖြတ်ချင်တယ်
ဆိုရင်လည်း ပြန်ပြင်ပြီး Record ပြန်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
၇။ ရှိပြီးသား Program တစ်ခုပေါ်မှာ ထပ်ပြီးတော့ မကူးမိစေဖို့အတွက် နေရာလွတ်တွေကို
အလိုအလျောက် ရှာပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်လည်း ရှိပါတယ်။
Blu-Ray ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ
Disc တွေဟာ Video တွေ Audio တွေ Data တွေ Pits တွေပေါ်မှာ သိမ်းပါတယ်။ Pits ဆိုတာ ဓာတ်ပြား
ပေါ်မှာ Data တွေ သိမ်းတဲ့ Megnetic Spot လေးကို ပြောတာပါ။ ဓာတ်ပြားရဲ့ အတွင်းကနေ အပြင်ဘက်
ကို အကြောင်းရာအတိုင်း ခရုပတ်ခွေလို ရစ်ပြီးထွက်သွားတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် ရှိပါတယ်။ Blu-Ray မှာ Data တွေ များများသိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒီလမ်းကြောင်းလေးကလည်း ပိုပြီး စိပ်ဖို့လိုတာပေါ့။ ဒီလမ်းကြောင်းလေး
တွေ ပိုပြီးစိပ်လေလေ သူ့ကိုတိုးပြီးဖတ်မယ့် Laser အလင်းတန်းကလည်း သေးငယ်ပြီး တိကျဖို့ လိုလာပြီလေ။
၁။ DVD က အနီရောင် Laser အလင်းတန်းကို သုံးပါတယ်။ Blu Ray က အပြာရောင် Laser
အလင်းတန်းကို Data တွေ ရေး/ဖတ်ဖို့အတွက် သုံးပါတယ်။
၂။ DVD မှာ အသုံးပြုတဲ့ အနီရောင် Laser အလင်းတန်းရဲ့ လှိုင်းအလျားသည် 650 nanometer ရှိပြီး
Blu-Ray မှာ သုံးတဲ့ အပြာရောင် Laser အလင်းတန်းကတော့ လှိုင်းအလျား 405 nanometer ရှိပါတယ်။
၃။ အလင်းတန်းရဲ့ အရွယ်အစားကိုလိုက်ပြီး Disc ပေါ်ကို အလင်းနဲ့ထိုးပြီး ဖတ်တဲ့အခါ ယူတဲ့နေရာ
ပမာဏလည်း ကွာသွားပါတယ်။ အဲဒီနေရာလေးကို Track Pitch လို့ ခေါ်ပါတယ်။ DVD ရဲ့Track Pitch သည် 0.74 micrometer ရှိပြီူး Blu-Ray ရဲ့ Track Pitch ကတော့ 0.3micrometer သာရှိပါတယ်။
၄။ Data တွေကို Disc ပြားပေါ် သိမ်းတဲ့အခါ ဓာတ်ပြားဖတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ Megnetic အပုံလေး
တွေ ပုံပြီးသိမ်းတာကို သိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီ Megnetic Spot လေးတွေကို Pit လို့ ခေါ်ပါတယ်။
DVD မှာ Pit တစ်ခုရဲ့ အတိုဆုံးအချင်းဟာ 0.4micrometer ရှိပါတယ်။ Blu-Ray မှာတော့ 0.15
micrometer သာ ရှိပါတယ်။
၅။ Tack Pitch ကလည်း ငယ်တယ်။ Pit ကလည်း သေးတယ်ဆိုတော့ Disc တချပ်တည်းပေါ်မှာ Data
အများကြီး သိုလှောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Blu-Ray ရဲ့Technology ကို အံ့သြစရာတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ DVD
တချပ်ဟာ ပမာဏ 8GB လောက် သိုလှောင်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ Two Layer Blu-Ray Disc တချပ်က
50GB အထိ သိုလှောင်နိုင်စွမ်း ရှိနေပါတယ်။
၆။ DVD နဲ့ Blu-Ray Disc တို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ Format ကလည်း အနည်းငယ် ကွဲပြားပါတယ်။ Blu-Ray Disc (BD) Format သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ နံပါတ်(၁)က BD-ROM လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Software တွေ Game တွေ Movies တွေကို တခါတည်း အသင့်သွင်းပြီး ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ Recording Type မှာ သုံးဖို့ပါ။
နံပါတ်(၂)က BD-R က HDTV နဲ့ PC Data တွေ သိမ်းဖို့အတွက်ပါ။
နံပါတ်(၃) BD-RE က ပြန်ဖျက်၊ ပြန်ရေးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားပါ။ HDTV နဲ့ PC Data တွေ အတွက်ပါ။
HD DVD Vs BD
တဖက်တည်းပဲ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ BD တချပ်ဟာ 25 GB ဆန့်ပါတယ်။ HD DVD ကတော့ 15GB ဆန့်ပါ
တယ်။ BD က 25GB ရတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် တကယ်တော့ သူ့ဆီမှာက သုံးမျိုးရှိတာပါ။ 23.3GB BD ရယ်၊ 25GB BD ရယ် 27GB BD ရယ် ဆိုပြီးတော့ ရှိပါတယ်။ HD DVD မှာ မရနိုင်တဲ့ အားသာချက် တစ်ခု
ကလည်း BD မှာ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ Dual-Layer Technology ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Dual Layer အရဆိုရင် 46.6GB၊ 50GB၊ 54GB အထိ ဆန့်တဲ့ BD တွေကို ရမှာပါ။ အနာဂတ်မှာတော့
100GB ကနေ 200GB အထိဆန့်တဲ့ 4-Layer ကနေ 8-Layer အထိရှိတဲ့ BD တွေကိုသုံးစွဲခွင့်